मानिसले कसरी आनन्दको मार्ग समात्न सक्छ? « Etajakhabar
–ब्रह्मश्री मित्र – कुनै विषयको दार्शनिक पक्ष र वैज्ञानिक पक्ष आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, व्यवहारिक पक्षमा सुक्ष्मभन्दा सुक्ष्म कुरालाई कसरी बुझ्ने? कसरी अनुभूत गर्ने? भन्ने नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई सबैभन्दा विशिष्ट पक्षका रुपमा पनि लिने गरिएको पाइन्छ। हामीले सरल तरिकाले कसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने मान्छेसँग दुईवटा ‘सेल्फ’ छ, एउटा रियल सेल्फ छ– हाम्रो आत्मा, जसले मौनको भाषा बुझ्छ। अर्को, माइन्ड भनेर हामी जुन कुरालाई भनिरहेका छौं, जुन अनरियल सेल्फ हो। यसले कतिपय अवस्थामा मानिसलाई कन्फ्युज बनाएको छ।
एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने माइन्ड भनेको अनरियल सेल्फ भएकाले यसको आफ्नै स्वभाव हुन्छ। यो माइन्डमा हामीले के बनाएका छौं भने मन, बुद्वि, चित्त र अहं’कार भन्छौं नि हामी। यो मनमा हामीले धेरै प्रकारका आइडेन्टिफिकेसन निर्माण गरेका छौं। जस्तो कि धनी, गरिब, जात, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, राजनीति आदि शब्दले मनलाई आल्हादित गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो मन चाहिँ हामीले गरेको जुन आइडेन्टिफिकेसन छ, हामीले गरेको जुन आरोपण छ। त्यसमै आधारित भएर हाम्रो मन चल्ने गर्छ।
यसका लागि कसैलाई राजनीति चाहिन्छ, कसैलाई धर्म चाहिन्छ, कसैलाई भाषा चाहिन्छ र कसैलाई साहित्य चाहिन्छ। यस्ता अनेकन कुरा मनले खेलाइरहेको हुन्छ। तर, जुन रियालिटी छ, मनको स्रोत छ, त्यो चाहिँ मनभन्दा पर छ। त्यसलाई हामीले स्प्रिट अर्थात् आत्मा भनिरहेका छौं, कन्सस्नेस भनिरहेका छौं चाहे धर्ममा बनेका आइडेन्टिफिकेसन हुन्, चाहे राजनीतिको नाममा बनेका आइडेन्टिफिकेसन हुन्, चाहे राष्ट्र, जाति, सम्प्रदाय अनि भाषाका नाममा बनेका आइडेन्टिफिकेसन हुन्। यी सबै मन र अहंकारले निर्माण गरेका आइडन्टिफिकेसन हुन्।
तपाईं कल्पना गर्नुहोस् त ब्राजिलको अमेजन जंगलमा हराउँदा कस्तो होला ? त्यस्तै हामी शब्दहरुको जंगलमा हराउँदा त्यसबाट बाहिर निस्कने कुनै उपाय नै रहँदैन। हामीसँग त्यस्तो शैली र शिक्षा नै छैन, दीक्षा नै छैन। यसरी सही तरिकाले बताउने गुरुको अभाव छ।
एउटा अप्रेसन गर्ने डाक्टरको हातमा छुरा, काँटा, सियो आदि औजार छ, यसरी औजारहरु कुनै नराम्रो कुरा होइन। त्यसैगरी हाम्रो आइडिया वा विचार पनि आफैंमा नराम्रो कुरा होइन। त्यो आइडियालाई उत्पादन गर्ने हामीभित्र ‘साइलेन्स’ विद्यमान छ। मौनताको आधारभूमि, जसलाई हामीले जरो–किलो (रुट एन्ड लोकस) भन्न सक्छौं, शरीर र संवेदनाको जरो–किलो, विचार र भावनाको जरो–किलो, आइडिया र सोचाइका जरो–किलोमा नगएको कारणले गर्दा मानिस मानिस कन्फ्युजनमा छ। यही अवस्थाबाट आजको मानिस गुज्रिरहेको छ।